अक्टोबर १, अन्तरार्ष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस
आज विश्व शौचालय दिवस, शाैचालय नभएको त्यो भव्य सेतो दरबार
बडादशैँको नवाैं दिन आज महानवमी
पढ्न लाग्ने समय : 14 मिनेट
नेपालमा वि.संं १९६८ बाट जनगणना सुरू भएको मानिन्छ । यसवर्ष १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना कार्तिक र मंसिर महिना सञ्चालन गर्ने तालिका रहेको छ । वि.संं १९६८ देखी हरेक १० वर्षमा देशव्यापी रूपमा जनगणना गरिन्छ । चन्द्रशमशेरले दासप्रथा उन्मुलन र विश्वयुद्धमा नेपाली युवा पठाउनका लागि उनीहरूको संख्या जान्ने प्रयोजनका लागि जनगणना गरेका थिए भन्ने गरिन्छ । हुनपनि श्री चन्द्रले सुरू गरेको जनगणना केबल टाउको गणनामा सिमित थियो ।
प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको पालामा पनि ३ पटक जनगणना भएको तथ्य रहेको छ जुन हस्तलिखित थियो । विसं १९१०, १९११ र १९१३ मा जंगबहादुरले गराएको नेपाली कागजमा लेखिएको उक्त गणनाको तीन अभिलेखमध्ये एकमा कप्तान सतराम खत्री र सुवेदार जगतबहादुर खत्रीले प्रतिवेदन तयार पारेको उल्लेख छ । सतराम तिनै व्यक्ति हुनुपर्छ जसले नेपाल सरकार र तत्कालीन भोट सरकारबीच वि.सं १९१० मा सम्पन्न सन्धिपत्रमा नेपाली भारदारको रूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जंगबहादुरका छोरा पदमजंग राणाले लेखेको जंगबहादुर राणाको जीवनीमा आफ्ना बुबाले आफ्नो शासनकालमा जनगणना गराएको तथ्य उल्लेख छ । यी तथ्यहरूले जंगबहादुरको शासनकालमा जनगणना गरिएको तथ्य पुष्टि हुन्छ । यस लेखोटबारे एक समय तथ्यांक विभाग, योजना आयोग र पुरातत्त्व विभाग जानकार रहेको देखिन्छ । तर, उनीहरूले आँखा चिम्लनाले ऐतिहासिक नेपाली समाजको बारे समेटिएका कैयन तथ्यबाट नेपाली समाज बेखबर रहयो ।
सहर भादगाउँका घर जहानको किताब शीर्षकको लेखोट वि.सं १९१० मा जनगणना गरेर तयार पारिएको देखिन्छ । यसमा भक्तपुर दरबार क्षेत्रका विभिन्न २४ टोलको मिहिन विवरण छ । एक सय ६८ वर्षअघि उक्त क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक हैसियत कस्तो थियो ? धार्मिक स्थल, पार्टी, पौवा र पोखरीको अवस्था कस्तो थियो ? घरहरूको संरचना कस्तो थियो भन्नेजस्ता तथ्यको दुरुस्त विवरण यो लेखोटमा उत्रिएको छ ।
इतिहास र संस्कृतिका अध्येता पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठका अनुसार १२ औं शताब्दी पुरानो सभ्यता रहेको भक्तपुर तीन सय वर्षसम्म लिच्छविकालको राजधानी रहेको थियो । आजभन्दा २१६ वर्षअघि प्रधानमन्त्री सरहको मुख्तियारी पद सम्हालेका भीमसेन थापाले आफ्नो शासनकालमा सम्पादन गरेर प्रकाशित गरिएको भनिएको ‘भाषा वंशावली’ मा तत्कालीन भादगाउँको जनसंख्या १२ हजार रहेको देखिन्छ । पुरुषोत्तमले भीमसेनको शासनकालमा १२ हजार रहेको जनसंख्या जंगबहादुरको पालामा २९ हजार २ सय २३ हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । उनले भने, ‘लेखोटमा उल्लिखित तथ्यबाट यसको प्रामाणिकतामा शंका गर्नुपर्ने देखिन्न ।’ उनका अनुसार त्यतिबेलाका शासक नै सहरबाहिर घर बनाउन हुन्न भन्ने मान्यता राख्ने भएकाले पनि जनसंख्या यिनै २४ टोलभित्र थुप्रिएको हुन सक्ने मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
यो पनि नेपालमा जनगणना
लिखोटमा मध्यपुर थिमीमा नयाँ र पुराना गरी ३ सय ९७ पसल रहेको देखिन्छ । यो तथ्यांकले थिमीको उतिबेलाको अर्थतन्त्रको मुहार चिन्न सघाउँछ । लेनदेन र ऐंचोपैंचो प्रणालीभन्दा पनि बजार प्रणालीलाई थिमीले स्विकारिसकेको देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै अर्थात् १ सय ६४ वटा खिच्रीमिच्रीको पसल रहेको भक्तपुरमा भाडा पसल मात्रै ५६ वटा रहेको देखिन्छ । त्यतिबेलाको थिमीमा कपासपसलको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको देखिन्छ । लेखोटमा भनिएको छ—थिमीमा मात्रै ७६ वटा त कपासकै पसल रहेका थिए । त्यस्तै फौबन्जार पसल ३० वटा, हलुवाईपसल ३० वटा, ज्यासल ३ वटा र पान पसल ३ वटा देखिन्छ । नेवार बाहुल्य रहको थिमीमा त्यतिबेलै ३ वटा पान पसल रहेको देखिन्छ । मल्ल राजाहरूकै पालामा भादगाउँमा मैथिल ब्राह्मण झाहरूको बसोबास रहेका कारण पनि पान पसलको उपस्थिति रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भादगाउँका स्थानीय झाहरूका अनुसार तीन सय वर्ष अघितिर तत्कालीन सिम्रौनगढ राज्यबाट झाहरू भादगाउँ आएको देखिन्छ । उतिबेलाको थिमीले देशबाहिरका मानिसलाई पनि व्यापार गर्न स्वीकृति दिएको देखिन्छ । थिमीमा मात्रै ६ वटा त कश्मीरी पसल रहेको देखिन्छ ।
धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको केन्द्र मानिने पाटन एक सय ६८ वर्षअघि कस्तो थियो होला ? विस १९१३ मा तयार पारिएको ‘सहर पाटनको घर जहानको किताब’ शीर्षक लेखोटमा तत्कालीन पाटनभित्रका २५ टोलको जनसांख्यिक विवरण समेटिएको छ । ईखांचे, कोंटी, कोबाहाल, भेलाछें, च्यासल, खर्पिछे, थेकछें, यनमुगल, चंकी, स्वकबहाल, दुपाट, न्हेफलें, घलायपाट, सौगल, मंगल, हौगल, टंगल, न्हागल, ईखालखु, थवुं, बला, गावाहाल, दथुढोल, नकवहिल, पुलचोक नकको जनसंख्या, घर विवरण, व्यापार–व्यवसाय अवस्था र धार्मिक र सांस्कृतिक स्थल वर्णन यो लिखोटमा उल्लिखित छ । विसं १९१० असार १ देखि १९११ साउनसम्ममा यी टोलमा नयाँ बनेका संरचनाको विवरण पनि यसमा समेटिएको छ । एक वर्षको यो अवधिमा पाटनमा २३१ वटा नयाँ घर बनेको र जसमा १ सय ५५ वटा झिंगटी घर बनेको देखिन्छ ।